Xubinta Dumarka afartaan ayuu ukala baxaa waxaana ugu mac …. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Xubinta Dumarka afartaan ayuu ukala baxaa waxaana ugu mac ….
Xubinta Dumarka afartaan ayuu ukala baxaa waxaana ugu mac ….
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 5-10-16 9:11 PM Ayadoo nuucyo kale duwan rabi u abuuro xubinta Dumarka usameeysanyihin ayaa Raga kala jecelyihiin qaababka ukala baxaan Xubinta Macaanka Badan Dumarka ayadoo hore nooga barateen in wax badan niga fahansiino Aqoonta Galmada.
Mid leh bahal mool (qusur dheer) meesha kintirka iyo boqa kala fogyihiin, waxaa u badan naagaha dhaadheer, middan waxay u baahantahay bahal dheer oo buuran. Mid leh bahal gudaha waasac ka ah oo qooyaan badan leh oona gudaha ka qabow.
Middan waxay ka heshaa buraashidda iyo ku rugrugid, Mid leh bahal Mid qaleel ah oo mar waliba u baahan in candhuuf ame Kareem loo marsado waxaa kufiican geydka dhuuban oo xogaa dheere.